Tag: dhabar jab | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 10, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kawaran haddii aad sawirro u diri kartid boggaaga ama balooggaaga, ka dhig kuwo is-dhexgal ah, oo leh adeegsiga iyo calaamadeynta safarka iyaga oo la socda maadaama ay ka soo guuriyeen boggaaga oo ay u badbaadiyeen mid kale? Waxaad hadda ku samayn kartaa Stipple. Stipple wuxuu kaloo awood u siiyaa macluumaadka isticmaalka adoo adeegsanaya xirmada gorfaynta. Mouseover sawirka hoose si aad u aragto Stipple oo ficil ah! Waxaad arki kartaa astaamaha is-dhexgalka ah ee aan ku daray sawirkan xafiiskayaga - khariidaynta,